#FindRaza: Fanentanana Amin’ny Media Sosialy Ho Amin’ny Fiverenan’ilay Mpikatroka Zon’Olombelona Pakistaney · Global Voices teny Malagasy
Mpanoratra Anushe Noor Faheem., Hija Kamran Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Voadika ny 10 Janoary 2018 14:25 GMT
Afisy navoaka hitadiavana an'ilay mpikatroka mpandala fandriampahalemana nanjavona, Raza Mehmood Khan. Nahazoana alalana
Ny 2 desambra 2017, nanjavona ilay mpikatroka zon'olombelona, Raza Mehmood, ka niteraka tahotra ny mikasika izay mety mahazo azy. Tamin'ny hetsika misokatra momba ny extremisma tao an-tanànan'i Lahore, Pakistan no nahitana azy farany. Mpikambana ao amin'ny vondrona Aghaz-e-Dosti (Manomboka Finamanana), izay miasa amin'ny fananganana fandriampahalemana eo amin'ny vahoakan'i Pakistan sy India i Khan, 40 taona.
Nilaza ny fianakavian'i Khan fa notazonin'ny sampan-draharaham-piarovana tamin'ny fomba tsy ara-dalàna izy, satria nitsikera azy ireo. Hatramin'izao, nolavin'ny sampan-draharaham-piarovana izany fanambarana izany.
Rehefa nitady azy manokana, 24 ora taorian'ny nanjavonany, nametraka Tatitra Fampahafantarana Voalohany (FIR) tany amin'ny polisy ny namana sy ny fianakavian'i Khan.
Mpikatroky ny zon'olombelona, Raza Mehmood Khan. Nahazoana alalana.
Satria miandry ny fiverenany azo antoka ny fianakaviany, nanao fanentanana amin'ny media sosialy ny mpikatroka mba hanery ny manampahefana handray fepetra. Ny tenirohy #FindRaza no nampiasaina hitakiana ny famerenana azy.
Nisioka i Awais Masood hoe:
Hikarakara sy hankalaza ireo manampahaizana ara-biôlôjiany, fa tsy hampanjavona azy ny fiarahamonina manana ny feon'ny fieritreretana!
Nikarakara hetsika ho amin'ny fiverenany ireo mpikatroka namany. Mpanao gazety sady mpiaro ny zon'olombelona, Marvi Sirmed nisioka hoe:
Azafady, aelezo ity hafatra ity. Nanjavona tamin'ny 2 desambra i Raza khan, tanora mpikatroka avy ao Lahore. Mangataka aminao izahay mba hiaraka aminay hitady azy sy hanandra-peo hangataka amin'ny fanjakana mba hitady azy.
Mpanao gazety Umer Ali nisioka sary tamin'ny hetsi-panoherana natao tao Lahore:
Tamin'ny fihetsiketsehana tao Lahore izay manohitra ny fakàna an-keriny an'ilay mpikatroky ny fandriampahalemana, Raza Khan, manontany ny mpisolovava iray hoe:
“iza indray ny manaraka? Ahy sa anao?
Niantso ny filohan'i Pakistana sy ny praiminisitra ho amin'ny fahitana an'i Khan tamin'ny alàlan'ny hafatra an-dahatsary i Saeeda Diep, mpikatroka niara-niasa tamin'i Khan, ary nisioka kosa ny Naya Daur, hetsika hananganana Pakistan mivoatra hoe:
Nanjavona tao Lahore i Raza Mahmood Khan, mpikatroky ny zon'olombelona. Niantso ny filoham-pirenena sy ny praiminisitra mba hamerina an'i Raza Khan ilay mpikatroky fandriampahalemana Indo-Pakistaney, antsoina hoe Saeeda Diep. Miaraka amin'i Raza Khan sy @DiepSaeeda izahay.
Noho ny fanentanana sy ny fitoriana nataon'ny fianakaviany, nampanantsoin'ny Fitsarana Tampony ao Pakistana ny mpitandro filaminana noho ny raharaha mikasika ny fanjavonan'ilay mpikatroky ny fandriampahalemana. Nitatitra ny Reuters fa:
Nisahana ny raharaha tamin'ny Alarobia ny Fitsarana Avon'i Lahore ary nangataka ny manampahefana miandraikitra ny tobin'ny polisy mba ho tonga amin'ny fotoam-pitsarana manaraka amin'ny 19 desambra ny mpitsara mpiahy, Anwar ul Haq misahana ny raharaha.
Tantaran'ireo mpikatroka Tsy Hita Ao Pakistan
Tsy vaovao ao Pakistan ny olan'ny fanjavonana ankaterena. Tany am-piandohan'ny taona 2017, mpikatroka media sosialy dimy no tsy hita. Tahaka an'i Khan, mpanakiana ny fanjakana sy ny miaramila izy ireo. Afaka 21 andro, navotsotra ihany ireo bilaogera.
Hatramin'ny fiverenan'izy ireo, niresaka ampahibemaso momba ny fampijaliana teo am-pelatanan'ny sampan-draharaham-panjakana izy ireo raha mbola any am-ponja. Ny resadresaka nataon'izy ireo dia mitantara ny fomba nanagadran'ny miaramila azy ireo miaraka amin'ny lehilahy an-jatony hafa tao amin'ny fonjabe, sy ny fanararaotana tsy an-kijanona nahazo azy ireo ary ny tsy famelana azy ireo hatory, miaraka amin'ny fampijaliana ara-batana, ara-nofo ary ara-tsaina izay naharitra andro maro.
Raharaha fanjavonana noterena 1 498 no mbola miandry, miaraka amin'ny vaomieran'ny fanadihadiana napetraky ny governemanta hamaha ny olana, araka ny tatitra nalefa tany amin'ny Fitsarana Tampony ao Pakistan.
Nisy ihany koa ny tombatombana mieli-patrana fa nalaina an-keriny noho ny fanevatevana, sy fandikan-dalàna teo ambany ny Andininy faha-295-C amin'ny Fehezan-dalàna Famaizana ao Pakistana , izay manameloka ho faty ny mpandika lalàna. Na dia izany aza, tsy nisy porofo ireo fiampangana ireo, ary tsy nisy olona nandray andraikitra tamin'ny fanjavonan'izy ireo, ka nahatonga ireo olona an-jatony nidina an-dalambe mba handray anjara amin'ny fihetsiketsehana milamina mitaky ny fiverenan'ireo mpikatroka ao anatin'ny fahasalamana.
Lalànan'ny Heloka Antserasera ao Pakistan: Ampiasaina amin'ny tsara sa ratsy?
Nolaniana tamin'ny taona 2016 ny Lalàna Fisorohana ny Heloka Anaty Aterineto (PECA), fantatra amin'ny anarana hoe lalànan'ny heloka antserasera mba hifehezana ny habetsaky ny heloka antserasera ao amin'ny firenena. Saingy, araka ny natahoran'ny fikambanan'ny fiarahamonim-pirenena, nampiasaina mba hanakanana ny fahalalaham-pitenenana amin'ny alalan'ny famerana ny mpanohitra ao amin'ny sehatra antserasera ny lalàna.
Milaza ireo Pakistaney laika fa nanjary fitaovam-piadiana ho an'ny olona mba hanampenam-bava ny mpanohitra ny fivavahana. Nilaza izy ireo fa ny lalàna – tahaka ny lalànan'ny heloka antserasera – dia ampiasaina mba handraràna ny olona tsy haneho ny fomba fijeriny manohitra ny habibian'ny fanjakana sy ny sampan-draharaham-piarovana.
Manana toerana eo amin'ny tantara ireo fihetseham-po ireo: rehefa nifarana ny fitondrana fanjanahan-tany Britanika tao amin'ny zana -kaontinanta 70 taona lasa izay, dia nisy firenena roa mahaleo tena tafatsangana- Pakistana sy India. Norafetin'ireo mpitondra Britanika tany am-boalohany tamin'ny taona 1860 ny fehezan-dalàna famaizana izay ampiharina ao Pakistana.
Na dia natao hifanaraka tamin'ny fitsipiky ny finoana silamo aza izany, dia mbola mitovy ihany ny zava-dehibe ao amin'ny lalàna ary taorian'ny fanitsiana maromaro, nalaina tamin'ny didi-pitsarana Islamika eo ambany ny aloky ny lalàna Anglisy ny dika ankehitriny, manamafy ny toe-tsaina fanjanahan-tany Britanika sy ny fiarovana apetrak'izy ireo mba hifehezana ny olom-pirenena.
Ohatra iray amin'izany ny fanitsiana ny lalàm-panorenan'i Pakistana tamin'ny taona 1985. Nampihatra izany lalàna izany ilay mpanao didy jadona ratsy malaza, Zia-ul-Haq, izay fantatra amin'ny fihetsehampony Islamista. Tsy vitan'ny hoe nanamafy ny vondrona mpikatroka voaràra izany, fa nanimba ny rafitra demaokratika ao Pakistana ihany koa. Na dia nolaniana sy narovana hatrany tamin'ny anaran'ny fiarovana ny zo lalàmpanorenan'ny olom-pirenena aza ireo lalàna ireo, raha ny marina dia ahitana tombotsoan'ny mpanankarena sy ny matanjaka ao amin'ny biraom-panjakana mandraka androany, .
Nosokajiana hatry ny ela ho firenena mampidi-doza indrindra ho an'ny mpanao gazety i Pakistana, ary niainana nandritra ny taona maro ny “Ady amin'ny Fampihorohoroana“, nihena hatrany tsy takatry ny saina ny fahavitrihana sy ny fahalalaham-pitenenan'ny vahoaka.
Ny fomba tena azo antoka ahitan'ny olom-pirenena maneho ny ahiahin'izy ireo amin'ny mpihaino marobe – sy indrindra indrindra amin'ny mpanao lalàna- dia amin'ny alalan'ny sehatra an-tserasera. Na izany aza, niteraka tahotra teo amin'ny vahoaka ny fanafihana vao haingana nihatra tamin'ireo mpanohitra an-tserasera, amin'ny anaran'ny fiarovana ny filaminam-pirenena na ny voninahitry ny finoana silamo, .
Ny famoretana ny mpanohitra sy ny fanjavonana ankaterena nihatra tamin'ireo mpikatroky ny zon'olombelona dia fanamafisana ampy ilazana fa matetika manaisotra ny sisa tavela amin'ny fahalalaham-pitenenana ho an'ny vahoaka ao Pakistana ny fandaniana ny lalàna henjana sy ny fampiharana azy tsy araka ny tokony ho izy.
Ao anatin'ny korontana ara-politika, ny fahatezerana noho ny fitohizan'ny tsy rariny, ary ny fikasana hampangina ny feo vitsivitsy sy marefo izay manome fitantarana amin'ny endrika hafa noho ny lahateny mpandala ny nentin-drazana ankapobeny, ny tahotra amin'ny fiarovana ny ainy no zavatra farany mety irian'ny olom-pirenena ao amin'ny firenena iray. Kanefa, any Pakistana, dia toa tsy maintsy matahotra izy ireo.